အလွန်အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တခု - APANNPYAY MEDIA
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ဖြစ်ရပ်မှန် / အလွန်အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တခု
Apann Pyay 5:18:00 AM ထူးဆန်းထွေလာ , ဖြစ်ရပ်မှန်
ကျမလည်းငှက်ကလေးကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းတာနဲ့တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်လွတ်ကြည့်တယ။်စာကလေးအကောင်နှစ်ဆယ်သာကုန်သွားတယ်သူအဖော်ပါမလာဘူး ။ဒါနဲ့ပဲ ဈေးသယ်ကိုအကုန်လွတ်မယ်ဆိုဘယ်လောက်လဲလို့မေးကြည့်တော့ခြောက်သောင်းလောက်ကျမယ်တဲ့ လှောင်အိမ်ထဲမှာအကောင်200လောက်ကျန်သေးတာကိုး ဒါလည်းမဖြစ်ချေဘူးပေါ့ နောက် ကျမလည်းအကြံတစ်ခုရလာတယ် အပြင်ကငှက်ကလေးကိုခြေထောက်မှာအမှတ်အသားတခုလုပ်ပြီးလှောင်အိမ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။
ခဏစောင့်ကြည့်ပြီးသူဘေးနားကပ်လာတဲ့အဖော်စာကလေးတစ်ကောင်ကိုပါအတူဖမ်းပြီးလွတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲငှက်ကလေးကသူ့အဖော်နဲ့အတူအဝေးက်ိုပြန်သွားတော့တယ်။ဒါပါပဲ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပေမယ့်ကိုယ်အကျဉ်းအကျပ်ထဲကလွတ်သွားပေမယ်ပြန်ဖမ်းရင်လည်းဖမ်းပါစေဆိုပြီးသေအတူရှင်မကွာနေမယ်ဆိုပြီးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပုံရပါတယ်။ကျမတွေးမိတာကကျမတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာမိသားစုဖြစ်စေ။လင်မယားဖြစ်စေ။မိတ်ဆွေဖြစ်စေ။သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ။လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်စေ. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာဒီငှက်ကလေးတွေထားတဲ့သံယောဇဉ်မျိုးထားနိုင်ဖို့တော်တော်ကြိုးစားယူကြရမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အသက်ကြီးလာလေပိုပြီးအတ္တတွေကြီးလာကြလို့ပါပဲ။
ကမြလညျးငှကျကလေးကွညျ့ပွီးစိတျမကောငျးတာနဲ့တဈကောငျပွီးတဈကောငျလှတျကွညျ့တယ။ျစာကလေးအကောငျနှဈဆယျသာကုနျသှားတယျသူအဖျောပါမလာဘူး ။ဒါနဲ့ပဲ စြေးသယျကိုအကုနျလှတျမယျဆိုဘယျလောကျလဲလို့မေးကွညျ့တော့ခွောကျသောငျးလောကျကမြယျတဲ့ လှောငျအိမျထဲမှာအကောငျ200လောကျကနျြသေးတာကိုး ဒါလညျးမဖွဈခဘြေူးပေါ့ နောကျ ကမြလညျးအကွံတဈခုရလာတယျ အပွငျကငှကျကလေးကိုခွထေောကျမှာအမှတျအသားတခုလုပျပွီးလှောငျအိမျထဲပွနျထညျ့လိုကျတယျ။
ခဏစောငျ့ကွညျ့ပွီးသူဘေးနားကပျလာတဲ့အဖျောစာကလေးတဈကောငျကိုပါအတူဖမျးပွီးလှတျကွညျ့လိုကျတယျ။အဲ့ဒီတော့မှပဲငှကျကလေးကသူ့အဖျောနဲ့အတူအဝေးကျိုပွနျသှားတော့တယျ။ဒါပါပဲ တိရစ်ဆာနျဖွဈပမေယျ့ကိုယျအကဉျြးအကပျြထဲကလှတျသှားပမေယျပွနျဖမျးရငျလညျးဖမျးပါစဆေိုပွီးသအေတူရှငျမကှာနမေယျဆိုပွီးစိတျပိုငျးဖွတျထားပုံရပါတယျ။ကမြတှေးမိတာကကမြတို့လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာမိသားစုဖွဈစေ။လငျမယားဖွဈစေ။မိတျဆှဖွေဈစေ။သူငယျခငျြးဖွဈစေ။လုပျဖျောကိုငျဖကျဖွဈစေ. တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဟာဒီငှကျကလေးတှထေားတဲ့သံယောဇဉျမြိုးထားနိုငျဖို့တျောတျောကွိုးစားယူကွရမယျထငျပါတယျ။ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ကမြတို့အသကျကွီးလာလပေိုပွီးအတ်တတှကွေီးလာကွလို့ပါပဲ။